by KRISHNA KC | Updated: 03 Jan 2019
सिहः नैव गजः नैव व्याघ्र: नैव च नैव च ।
अजा पुत्रः बलिम् दद्दात दैवाे दुर्बल धातकः ।
देबी भागवतको यो श्लोक खै आज कसरी सम्झिन पुगे, जुन बाल्यकालमा कसैको दिब्य मुखारवृन्दबाट सुनेको थिए। जसको अर्थ हुन्छ-शिंहको बच्चा, हात्तिको बच्चा वा बाघको बच्चालाई कसैले बलि दिदैनन दुर्बल बाख्रीको पाठोलाई बलि दिइन्छ। दैब पनि दुर्बलको लागि घातक छ।
बास्तबमा हुन पनि हो शिह, बाघ वा हात्तिको बच्चालाई बलि दिने गरि यो काम सुरुवात भएको भए आज न त बलि प्रथाको रुपमा यो कायम रहन्थ्यो न त यसको सिको राजनीति र अरु ठाउमा हुन्थ्यो होला। दैबले पनि दुर्बललाई नै घात गर्दो रहेछ भने मान्छे को त कुरै छोडिदिउ।
प्रसङ्ग हो मार्शी काण्ड घटेको बेलामा बंगलादेशमा अध्यनरत बिद्यार्थी माथि अपशब्द बोलेको आरोपमा तत्कालिन मन्त्री शेर बहादुर तामांगको राजिनामा मागिनु। अनि उनले भाब बिहल भएर रुदै गल्ति स्वीकार्दै राजीनामा दिनु र दिन लाएर काण्ड मत्थर पार्नु। मार्शीमा लुकेको पार्सीसंग उनको के स्वार्थ थियो त्यो उनै जानुन। जे होस् सरकार माथि भएको चौतर्फी प्रहारको अरिन्गले प्रतिकार गर भन्ने आदेशलाई शिरोधर गर्दा भाबाबेगमा अनायासै अप शब्द फुस्किदा उनको मन्त्रीपद देबी भगवतको बाख्राको पाठो जस्तो हुनपुग्यो।
बिगतमा उनको बिरोधमा बाह्र हात उफ्रानेहरु उनकै पार्टीकाहरु पनि राजीनामा दिदा उनले रुदै दिएको अभिव्यक्ति र देखाएको नैतिकताका अगाडी नतमस्त बनेका छन्। उनको मन्त्री पदलाई बलि दिएर त्यो सर्ब कलंकित मार्शीको साढे सातको दशा कटाउने काम यहि सरकारले गर्यो।
आज परिस्थिति फेरी उस्तै आएको छ। वाईडबडी काण्डका नाममा अरबौ घोटला भयो भन्दै कुनै मन्त्री माथि आरोप लागएर संसदीय उप समितिले कारबाहीको लागि शिफारिस गरेको छ। यस बिषयमा पत्रकारहरुले प्रश्न शोध्दा मन्त्रीसंग यस्ता साना मसिना कुरा गर्ने भन्दै माइक नै लत्याइन्छ। यस्तो लज्जास्पद घटना प्रति सरकारको ध्यान कहिले आकर्षित हुने हो त्यो भने कसैसंग पनि जवाफ छैन।
संसदिय व्यवस्था भएको कुनै पनि मुलुकमा संसदीय समिति वा उपसमितिबाट गरिएको शिफारिशलाई सायदै यसरी नजरअन्दाज गरिन्न होला। यो एक संघिन अभियोग पनि हो। हो, कोहि पनि आरोप लाग्दैमा अपराधि हुदैन। तर आरोप लाग्यो भने सम्बन्धित पदमा बसी राख्नु पनि नैतिकता हुदैन। प्रमाण मेटाउने आशंकामा पदमा राखिन्न पनि। यो एक विश्वब्यापी मान्यता पनि हो। जसले अनुशन्धान गर्न सहयोग पनि गर्छ। तर बिडम्बना न त मन्त्री आफै राजिनामा दिन्छन न त उनलाई हटाइन्छ।
अब प्रश्न उठ्छ कि निर्मला काण्डको अनुसन्धानमा संग्लग्न प्रहरीहरुलाई निलम्बन गर्नु र संपुर्ण प्रहरीहरुको इज्जत मान मर्दन हुने गरी यसपीको डीएनए टेष्ट गर्नु ठीक हो त ? हो, सरकारलाई थाहा र छ त आरोप लागेका सबैलाई पदमा राखी राख्नु हुदैन यसले अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पार्छ भन्ने हेक्का त आखिरमा रहेछ त्। अनि सरकार किन डराउदै छ त ? मन्त्रीको राजिनामा माग्न, हुन त अनुसन्धान गरेमा पनि हुने त आखिर के पो नै हो र उही बिगतका लाउडा, धमिजा, चइना साउथ, वेस्ट, सुडान, लडाकु क्यानटोनमेन्ट काण्ड जस्तै त हो।
सायद त्यहि भएर होला चुप बस्न खोजेको हो भन्ने कुराको अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ। इतिहासमै नभएको सत्य तथ्य बाहिर आएर दोषीलाई कार्बाही होला भन्ने आश त नगरौ तर देबी भागवतको त्यो श्लोक चरितार्थ भयो आज भन्ने कुरा भने मैले बिझे। शिह, बाघ र हात्तिको बच्चालाई केहि नगर्ने बिचरो निर्बल बाख्रीको पुत्रलाई बलि दिने काम भयो।
यसै त धर्म निरपेक्ष राज्य त्यहाँ माथि आफूलाई सबै भन्दा प्रगतिशील ठान्ने र हाल सालै मुनको होलि वाइनको आशिर्बाद समेत लिएको सरकारले तपाइहरु कै शब्दको समवृद्धिको बाधक हिन्दु दर्शनको यो जाबो श्लोकलाई चरितार्थ पारेको यहाँ भन्दा बढी देख्न नपरोस।